Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. वर्ल्ड वडी विल्डिङ च्याम्पियनसिपमा भाग लिन नेपाली टोली सोमवार दुवई प्रस्थान गर्दै – Emountain TV
वर्ल्ड वडी विल्डिङ च्याम्पियनसिपमा भाग लिन नेपाली टोली सोमवार दुवई प्रस्थान गर्दै
झापा, १६ कात्तिक । विश्वले चिनेको तर नेपालले नचिनेको खेलको रुपमा शारीरिक सुगठनलाई हेर्ने गरिएको छ । सरकारले समेत अन्य खेललाई जस्तो शारीरिक सुगठन अर्थात वडी विल्डिङ्लाई गम्भीरताका साथ हेरेको पाइँदैन ।
तर, यही खेल खेलेर नेपाली खेलाडीले नेपाललाई पटक–पटक स्वर्ण पदक दिलाएका छन् । नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाउने खेलाडी मध्ये झापाका राम दाहाल पनि एक हुन् ।
संयुक्त अरव इमिरेट्स् (यूएई) को फुजेरा सिटीमा नोभेम्वर ६ देखि १० तारिकसम्म हुने वर्ल्ड वडी विल्डिङ च्याम्पियनसिपमा नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाउने खेलाडी मध्येका एक हुन् झापा बिर्तामोडका राम दाहाल ।
उनी विश्व सामु ६० केजी तौल समूहमा प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् । उनीसंगै अन्य चार खेलाडी समेत सो प्रतियोगितामा भाग लिन सोमवार दुवई प्रस्थान गर्दैछन् । जसमध्ये दुई जना वडी विल्डिङमा र दुई जना फिजिक्समा प्रतिष्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ।
खेलको माध्यमबाट नेपाललाई विश्वसामू चिनाउनु भएका दाहालले यस अघि नवौं साफ गेममा ६० केजी तौल समूहमा स्वर्ण पदक हात पार्न सफल बन्नुभयो । हालै चीनमा भएको एसियन गेममा समेत ६५ केजी तौल समूहमा समेत उहाँले प्रतिष्पर्धा गर्नुभयो ।
जसमा चौथो स्थान हात पार्न सफल बन्नुभएका दाहालले थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा स्वर्णपदक जित्नु भएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा खेल खेलेर विश्वसामू नेपाललाई चिनाउनु भएका दाहाल यो पटक पनि दुवईमा हुने अन्तराष्ट्रिय वडी विल्डिङ च्याम्पियन सिपमा भाग लिने हुनुभएको छ ।
कात्तिक २१ देखि २४ गतेसम्म दुबईमा आयोजना हुने विश्व च्याम्पियनसिप प्रतियोगितामा नेपाल लगायत ९० मुलुकका खेलाडीले प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् । दुबई जाने नेपाली टोलीमा चार जना खेलाडी सहित सात जना रहनेछन् ।
नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तराष्ट्रिय शारीरिक सुगठन प्रतियोजितामा सहभागीता जनाउने भएपछि उहाँलाई बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघले एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै विदाई गरेको छ ।
यता विर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष राजु न्यौपानेले खेलाडीलाई राष्ट्रको गहनाको रुपमा हेर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
सन् २०१३ मा हङकङमा भएको एशियन खेलकूद प्रतियोगितामा शारीरिक सुगठनको ६० केजी तौल समूहमा रजतपदक जितेर राम दाहालले अन्तरराष्ट्रिय ख्यातिको शुरुआत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले सन् २०१५ र सन् २०१८ मा भएको साफ खेलकूदमा ६० केजी तौल समूहमा स्वर्णपदक जित्नुभएको थियो । वर्ल्ड वडी विल्डिङ च्याम्पियन सिपमा नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाउनु हुने दाहालले नेपाललाई यो पटक पनि स्वर्ण पदक दिलाउने आश गरिएको छ ।